China Plastic Inaliti isikhunta Umkhiqizi kanye Umthengisi I-Mestech
Plastic umjovo isikhunta iyithuluzi lokukhiqiza imikhiqizo yepulasitiki, esetshenziselwa ikakhulukazi ukukhiqizwa ngobuningi. Umjovo isikhunta anganikeza isakhiwo ephelele kanye nosayizi olunembile imikhiqizo plastic sizikhandle futhi ngokushesha.
Yiziphi isikhunta somjovo wepulasitiki
Plastic umjovo isikhunta(Umjovo isikhunta) uhlobo imishini ukukhiqiza imikhiqizo epulasitiki, futhi ithuluzi ukunikeza imikhiqizo epulasitiki isakhiwo ephelele nosayizi olunembile. Umjovo udini uhlobo ukucutshungulwa indlela esetshenziswa ekukhiqizweni izingxenye ezithile eziyinkimbinkimbi. Ngokuqondile, ipulasitiki encibilikiswe ukushisa ijojowe emgodini wesikhunta ngomshini wokubumba umjovo ngaphansi kwengcindezi ephezulu, bese ipholile futhi yaqina ukuthola imikhiqizo ebunjiwe.
Izici umjovo isikhunta
Isikhunta se-1.Injection singakha izingxenye zepulasitiki ezinesakhiwo esiyinkimbinkimbi, usayizi onembile nekhwalithi yangaphakathi enhle ngasikhathi sinye.
2.Nakuba ukwakheka kwesikhunta sepulasitiki kungahluka kakhulu ngenxa yezinhlobonhlobo nokusebenza kwepulasitiki, ukuma nokwakheka kwemikhiqizo yepulasitiki nohlobo lomshini wokujova, isakhiwo esiyisisekelo siyefana. Isikhunta sakhiwa kakhulu ngokuthela uhlelo, uhlelo lokushisa lokulawula, ukwakha izingxenye nezingxenye zesakhiwo. Isistimu yokuthela nezingxenye zokubumba izingxenye ezixhumana ngqo namapulasitiki futhi zishintshe ngepulasitiki nemikhiqizo. Yizingxenye eziyinkimbinkimbi kunazo zonke futhi ezishintshayo ekubunjweni kwepulasitiki, ezidinga ukucubungula okuphezulu kakhulu nokunemba.
Ukwakhiwa kwesikhunta somjovo
Isikhunta somjovo sakhiwa isikhunta esihambayo nesikhunta esinqunyiwe. Isikhunta esihambayo sifakwe kuthempulethi ehambayo yomshini wokubumba umjovo, futhi isikhunta esinqunyiwe sifakwe kusifanekiso esinqunyelwe somshini wokubumba umjovo. Ngesikhathi sokubunjwa komjovo, isikhunta esihambayo kanye nesikhunta esinqunyiwe kuvaliwe ukwakha uhlelo lokuthela kanye nesikhunta. Lapho kuvulwa isikhunta, isikhunta esisusekayo nesikhunta esinqunyiwe kuyahlukaniswa ukukhipha imikhiqizo yepulasitiki. Ukuze wehlise umthwalo osindayo womklamo wesikhunta nokukhiqiza, iningi lesikhunta somjovo lisebenzisa isisekelo esijwayelekile sesikhunta.
Izinhlobo zesikhunta ngokusho kwezici zokusebenzisa
(1) Isikhunta somgijimi oshisayo
Ngosizo lwedivayisi yokushisa, amapulasitiki asohlelweni lokuthela ngeke aqiniswe futhi ngeke adilizwe nomkhiqizo, ngakho-ke kubizwa nangokuthi i-runnerless die. Izinzuzo: 1) Ayikho imfucuza 2) enganciphisa ingcindezi yomjovo, ingasebenzisa izikhunta ezinemigogodla eminingi 3) inganciphisa umjikelezo wokubumba 4) ithuthukise ikhwalithi yemikhiqizo efanelekile yezici zokubumba umgijimi oshisayo: 5) ububanzi bokushisa kweplastiki bubanzi. Iqukethe uketshezi oluhle emazingeni okushisa aphansi kanye nokuqina okuhle kokushisa ezishisayo. I-6) Iyazwela ekucindezelweni futhi ayigelezi ngaphandle kwengcindezi, kepha ingahamba lapho ingcindezi isetshenziswa. 7) Ukushisa okuhle okuqondile, ukuze kuphole ngokushesha ku-die. Amapulasitiki atholakala kubagijimi abashisayo yi-PE, ABS, POM, PC, HIPS, PS. Kunezinhlobo ezimbili zabagijimi abavamile abashisayo: 1) imodi yomgijimi yokushisa 2) imodi yomgijimi we-adiabatic.
(2) Isikhunta esiqinile
Ipuleti lensimbi elisetshenziswe ekufeni kwangaphakathi lidinga ukwelashwa kokushisa ngemuva kokuthenga, njengokucisha kanye ne-carburizing, ukuhlangabezana nezidingo zokusetshenziswa. Isikhunta esinjalo somjovo sibizwa ngokuthi yi-hard die. Isibonelo, i-die yangaphakathi isebenzisa i-H13 steel, i-420 steel ne-S7 steel.
(3) Isikhunta esithambile (ngaphansi kwe-44HRC)
Insimbi esetshenziswe ekubunjweni kwangaphakathi ingahlangabezana nezidingo zokusetshenziswa ngaphandle kokwelashwa kokushisa ngemuva kokuthenga. Umjovo onjalo ubizwa ngokuthi isikhunta esithambile. Uma i-die yangaphakathi yenziwe ngensimbi engu-P20, insimbi yecilongo, insimbi engu-420, i-NAK80, i-aluminium ne-beryllium yethusi.
(4) Double-umjovo isikhunta
Isikhunta esinemijovo emibili siyisikhunta lapho kufakwa khona izinto ezimbili zepulasitiki emshinini ofanayo wokujova umjovo futhi zibunjwe kabili, kepha umkhiqizo ukhishwa kanye kuphela. Ngokuvamile, le nqubo yokubumba ibizwa nangokuthi izingxenye ezimbili zomjovo wokubumba, okuvame ukuqedwa ngeqoqo lesikhunta futhi kudinga umshini okhethekile wokudubula umjovo emibili
(5) Injection udini nge-isikhunta umhlobiso & e-isikhunta kophawu
Ukufakwa kwepulasitiki ngomjovo nge-gating system
Izikhunta zepulasitiki zingahlukaniswa ngezigaba ezintathu ngokuya ngezinhlobo ezahlukahlukene zohlelo lwesango.
(1) Isikhunta sesango le-Edge (isikhunta samapuleti amabili): Umgijimi nesango kudilikile kanye nomkhiqizo kulayini wokuvalelisa. Idizayini ilula kakhulu, kulula ukuyicubungula, futhi izindleko ziphansi. Ngakho-ke, abantu abaningi basebenzisa uhlelo lwemibhobho emikhulu ukusebenza. Ukwakheka kwesikhunta sepulasitiki kuhlukaniswe kwaba izingxenye ezimbili: isikhunta esiguqukayo nesikhunta esinqunyiwe. Ingxenye ehambayo yomshini wokujova ingxenye ehambayo (ikakhulukazi uhlangothi lokukhipha), nokungasebenzi ekugcineni kokukhishwa komshini wokujova ngokuvamile kubizwa ngokuthi isikhunta sokulungisa. Ngoba ingxenye engaguquki yombhobho omkhulu wombhobho ivame ukwenziwa ngamapuleti amabili ensimbi, ibizwa nangokuthi isikhunta samapuleti amabili. Isikhunta samapuleti amabili yisakhiwo esilula kakhulu sesikhunta esikhulu sombhobho.
(2) Isikhunta se-pin-point (isikhunta samapuleti amathathu): umgijimi nesango abekho kulayini wokuvalelisa, ngokuvamile ngqo kumkhiqizo, ngakho-ke kuyinkimbinkimbi ngokwengeziwe ukuklama iqembu lomugqa wokuvalelisa umlomo wombhobho, futhi kunzima ukucubungula . Uhlelo oluhle lwe-nozzle luvame ukukhethwa ngokuya ngezidingo zomkhiqizo. Ingxenye engaguquki yomlomo wombhobho omuhle imvamisa yakhiwe ngamapuleti amathathu ensimbi, ngakho-ke ibizwa nangokuthi "isikhunta sepuleti ezintathu" salolu hlobo lokufa kwesakhiwo. Isikhunta samapuleti amathathu yisakhiwo esilula kunazo zonke zesikhunta esihle somlomo.
(3) Hot umgijimi isikhunta: Isakhiwo lolu hlobo die ngokuyisisekelo kuyefana ukuthi umlomo wombhobho emihle. Umehluko omkhulu ukuthi umgijimi utholakala kupuleti elilodwa lomgijimi oshisayo noma ngaphezulu kanye namaswidi ashisayo anokushisa okungaguquki. Akukho ukubhujiswa kwempahla ebandayo futhi umgijimi nesango ngqo kumkhiqizo. Ngakho-ke, umgijimi akadingi ukulimaza. Lolu hlelo lubizwa nangokuthi uhlelo lwe-nozzle, olungagcina izinto zokusetshenziswa futhi luyasebenza. Endabeni yezinto zokusetshenziswa ezibiza kakhulu nezidingo eziphakeme zemikhiqizo, kunzima ukuklama nokusebenza, futhi izindleko zokufa nezikhunta ziphakeme. Uhlelo lomgijimi oshisayo, owaziwa nangokuthi uhlelo lomgijimi oshisayo, ikakhulukazi luqukethe umkhono womgijimi oshisayo, ipuleti lomgijimi oshisayo nokulawula ibhokisi lokushisa. Uhlelo lwethu lomgijimi oshisayo olujwayelekile lunezindlela ezimbili: umgijimi oshisayo oyiphuzu elilodwa nomgijimi oshisayo onamaphoyinti amaningi. Iphuzu elilodwa isango elishisayo ukujova ipulasitiki encibilikisiwe ngqo emgodini ngomkhono owodwa oshisayo wesango, ofanele umgodi owodwa nesikhunta esisodwa sepulasitiki esangweni; iphoyinti lesango elishisayo elehlukanisiwe lihlukanisa okokuncibilikiswa egatsheni ngalinye lomkhono weSango Lokushisa ngepuleti elishisayo bese ungena emgodini. Ifanele umgodi owodwa, okuphakelayo kwamaphoyinti amaningi kanye nezikhala eziningi
Ukusetshenziswa plastic umjovo isikhunta
Injection isikhunta inqubo ebalulekile imishini yokukhiqiza imikhiqizo ehlukahlukene yezimboni. Ngokuthuthuka okusheshayo komkhakha wepulasitiki nokwenyusa kanye nokusetshenziswa kwemikhiqizo yepulasitiki emikhakheni yezimboni ezinjengezindiza, i-aerospace, i-elekthronikhi, imishini, umkhumbi nemoto, izidingo zemikhiqizo esikhunta nazo ziphakeme kakhulu. Indlela yendabuko yokwakhiwa kwesikhunta yehlulekile ukuhlangabezana nezidingo zanamuhla. Uma kuqhathaniswa nokwakheka kwesikhunta kwendabuko, ubuchwepheshe obusizwa nge-computer be-CAE ubuchwepheshe bunezinzuzo ezinkulu ekuthuthukiseni umkhiqizo, ukuqinisekisa ikhwalithi yomkhiqizo, ukunciphisa izindleko nokunciphisa ukuqina kwabasebenzi.
1.Imikhiqizo ye-elekthronikhi neyokuxhumana:
2. Izinsiza kusebenza zasehhovisi;
3. Izingxenye zezimoto ezizimele;
4. Izinto ezisendlini
6. Ukuvikelwa kwezokwelapha nezemvelo;
7. Izikhungo zezimboni;
10. Izinto zokwakha, ikhishi nezinto zangasese namathuluzi
IMestech ingumkhiqizi onguchwepheshe osebenza ekukhiqizeni umjovo wesikhunta kanye nomjovo womjovo iminyaka ecishe ibe ngu-20. Sine onjiniyela ithimba elihle futhi ocebile yokukhiqiza isipiliyoni. Asikwazi ukuklama nokukhiqiza ikhwalithi ephezulu yomjovo wepulasitiki kumakhasimende ethu. Izikhunta zethu zomjovo zimboza izinto zikagesi, ezikagesi, ezezimoto, ezokwelapha, ezokuhamba kanye nezimboni. Uma udinga, sicela ukhululeke ukuxhumana nathi.
Langaphambilini Die isikhunta ekubunjweni
Olandelayo: Hot umgijimi isikhunta